सामान्य प्रश्नहरु - AOOD टेक्नोलोजी लिमिटेड
पर्ची रिंग र रोटरी यूनियनहरु को फरक के हो?
दुबै पर्ची रिंगहरु र रोटरी युनियनहरु एक रोटरी भाग बाट एक स्थिर भाग मा घुमाउने बेला मिडिया स्थानान्तरण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। तर पर्ची रिंग को मिडिया शक्ति, संकेत र डाटा छ, रोटरी युनियन 'मिडिया तरल र ग्यास हो।
AOOD विद्युत घूर्णन उत्पादनहरु को वारंटी को बारे मा?
AOOD कस्टम पर्ची रिंगहरु बाहेक सबै बिजुली घुमाउने उत्पादनहरु को लागी एक बर्ष वारंटी छ। यदि कुनै एकाइ सामान्य काम वातावरण को तहत राम्रो संग काम गर्दैन, AOOD बनाए वा मुक्त गर्न को लागी यसलाई बदल्नेछ।
कसरी मेरो आवेदन को लागी सही पर्ची रिंग मोडेल चयन गर्न को लागी?
सर्किट को संख्या, वर्तमान र भोल्टेज, आरपीएम, आकार सीमा AOOD पर्ची रिंग को कुन मोडेल को आवश्यकता को निर्धारण गर्दछ। थप रूपमा, हामी तपाइँको वास्तविक आवेदन (कम्पन, लगातार काम गर्ने समय र संकेत को प्रकार) मा विचार गर्नेछौं र तपाइँको लागी सही समाधान बनाउनेछौं।
मँ AOOD टेक्नोलोजी लिमिटेड लाई हाम्रो पर्ची रिंग पार्टनर को रूपमा चयन गर्नु पर्छ? तिम्रो फाइदा के छ?
AOOD को उद्देश्य ग्राहकहरु लाई सन्तुष्ट पार्नु हो। प्रारम्भिक डिजाइन, सामाग्री चयन, उत्पादन, परीक्षण, प्याकेज र अन्तिम वितरण बाट। हामी सधैं सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हाम्रा ग्राहकहरु छोटो समय मा सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरीय उत्पादनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
AOOD कसरी संकेत हस्तक्षेप बाट पर्ची रिंग लाई रोक्छ?
AOOD ईन्जिनियरहरु तल पहलुहरु बाट संकेत हस्तक्षेप रोक्न हुनेछ: एक। पर्ची रिंग को भित्री बाट संकेत छल्ले र अन्य शक्तिहरु को घण्टीहरु को दूरी बढाउनुहोस्। ख संकेत स्थानान्तरण गर्न विशेष परिरक्षित तारहरु को उपयोग गर्नुहोस्। ग संकेत छल्ले को लागी बाहिरी ढाल जोड्नुहोस्।
एक पटक एक आदेश राखिएको छ AOOD वितरण समय के हो?
हामी धेरै मानक पर्ची रिंगहरु को लागी स्टक उचित मात्रा मा छ, त्यसैले वितरण समय सामान्यतया एक हप्ता भित्र छ। नयाँ पर्ची रिंगहरु को लागी, हामी शायद 2-4 हप्ता को जरूरत छ।
म कसरी बोर मार्फत पर्ची रिंग माउन्ट गर्नुपर्छ?
सामान्यतया हामी यसलाई स्थापना शाफ्ट र सेट पेंच द्वारा माउन्ट, हामी निकल्न जोड्न सक्छौं यदि तपाइँलाई आवश्यक छ भने तपाइँको स्थापनासँग मेल खान्छ।
दोहोरो ब्यान्ड 2-अक्ष डिजिटल समुद्री उपग्रह एन्टेना प्रणाली को लागी, तपाइँ केहि उपयुक्त पर्ची रिंग समाधान को सिफारिश गर्न सक्नुहुन्छ?
AOOD समुद्री एन्टेना प्रणाली र सडक एन्टेना प्रणाली मा सहित एन्टेना प्रणालीहरु को लागी पर्ची रिंगहरु को धेरै प्रकार को पेशकश गरेको छ। ती मध्ये केहि उच्च आवृत्ति संकेत स्थानान्तरण गर्न को लागी आवश्यक छ र ती मध्ये केहि उदाहरण को लागी IP68, उच्च सुरक्षा डिग्री चाहिन्छ। हामी सबैले गरेका छौं। कृपया तपाइँको विस्तृत पर्ची रिंग को आवश्यकताहरु को लागी AOOD लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
नयाँ टेक्नोलोजी को बृद्धि संग, अधिक उन्नत पर्ची रिंगहरु विशेष संकेत हस्तान्तरण गर्न को लागी आवश्यक छ। कुन संकेत AOOD पर्ची रिंगहरु द्वारा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ?
वर्ष 'आर एण्ड डी र सहयोग को अनुभव संग, AOOD पर्ची रिंगहरु सफलतापूर्वक सिमुलेट भिडियो संकेत, डिजिटल भिडियो संकेत, उच्च आवृत्ति, PLD नियन्त्रण, RS422, RS485, अन्तर बस, CanBus, Profibus, यन्त्र नेट, गीगा ईथरनेट र यति मा हस्तान्तरण गरिएको छ।
म 1080P र सानो संरचना मा केहि अन्य सामान्य संकेत च्यानलहरु हस्तान्तरण गर्न को लागी एक पर्ची रिंग को लागी हेर्दै छु। के तपाइँ यो जस्तै केहि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ?
AOOD आईपी क्यामेरा र HD क्यामेरा जो दुबै HD संकेत र कम्प्याक्ट कैप्सूल पर्ची रिंग फ्रेम मा सामान्य संकेत स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ को लागी HD पर्ची रिंगहरु विकसित गरीएको छ।
के तपाइँ केहि छ कि 2000A वा उच्च वर्तमान स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ?
हो हामीसँग छ। AOOD बिजुली घुमाउने कनेक्टर मात्र पृष्ठभूमि र color स्थानान्तरण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ: #f0f0f0; उच्च वर्तमान।
यदि पर्ची रिंग उच्च सुरक्षा डिग्री, जस्तै IP66 को आवश्यकता छ। के टोक ठूलो हुनेछ?
उन्नत टेक्नोलोजी र विशेष उपचार संग, AOOD एक पर्ची रिंग मात्र IP66 तर धेरै सानो टोक़ बनाउन सक्छ। एक ठूलो आकार को पर्ची रिंग, हामी यसलाई उच्च सुरक्षा संग सजीलो संग काम गर्न को लागी सक्षम गर्दछौं।
एक ROV परियोजना को लागी, हामी रोटरी जोड़हरु जो एकल मोड फाइबर अप्टिक संकेत र गहिरो समुद्र मुनि शक्ति प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ एक जोडी को आवश्यकता छ। के तपाइँ त्यस्तो केहि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ?
AOOD सफलतापूर्वक ROVs र अन्य समुद्री अनुप्रयोगहरु को लागी रोटरी जोड़हरु को धेरै प्रस्ताव गरीएको थियो। समुद्री वातावरण को लागी, हामी कर्पोरेट फाइबर ओप्टिक रोटरी संयुक्त विद्युत पर्ची रिंग मा संयुक्त, एक पूरा विधानसभा मा फाइबर ओप्टिक संकेत, शक्ति, डाटा र संकेत प्रसारण गर्न। थप रूपमा, हामी पुरा तरिकाले उपयोग को स्थिति को खाता मा लिन्छौं, स्लिप रिंग को आवास स्टेनलेस स्टील, दबाव मुआवजा र सुरक्षा वर्ग IP68 को पनी गरिनेछ।
नमस्ते, हाम्रो टीम एक रोबोट परियोजना डिजाइन गरीरहेको छ, हामी केबल समस्याहरु लाई हल गर्न को लागी केहि रोबोट रोटरी जोड़हरु को जरूरत छ, मलाई थाहा छ तपाइँ यसको लागी के गर्न सक्नुहुन्छ।
रोबोट आवेदन मा, पर्ची औंठी रोबोट रोटरी संयुक्त वा रोबोट पर्ची रिंग को रूप मा जानिन्छ। यो रोबोट हात नियन्त्रण इकाई को आधार फ्रेम बाट संकेत र शक्ति प्रसारण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो दुई भागहरु छन्: एक स्थिर भाग रोबोट हात मा माउन्ट गरिएको छ, र एक घुमाउने भाग रोबोट कलाई माउन्ट। एक रोबोट रोटरी संयुक्त संग, रोबोट कुनै केबल समस्या बिना अनन्त ३ rot० रोटेशन प्राप्त गर्न सक्छन्। रोबोट को विनिर्देशों को अनुसार, रोबोट रोटरी जोड़हरु व्यापक रूप मा दायरा। सामान्यतया एक पूरा रोबोट धेरै रोबोट पर्ची रिंग को आवश्यकता छ र यी पर्ची रिंगहरु शायद फरक आवश्यकताहरु संग छन्। अब सम्म, हामी पहिले नै बोर पर्ची रिंगहरु, प्यान केक पर्ची रिंगहरु, फाइबर ओप्टिक रोटरी जोड़हरु, इलेक्ट्रो ओप्टिक रोटरी जोड़हरु र रोबोटिक्स को लागी कस्टम रोटरी समाधान को माध्यम बाट कम्पैक्ट कैप्सूल पर्ची रिंग, प्रस्ताव गरीएको छ।
तपाइँको पर्ची रिंग समाधान राम्रो लाग्छ, तर तपाइँ के परीक्षण गर्नुहुन्छ? तपाइँ कसरी आचरण गर्नुहुन्छ?
साधारण AUOD सानो आकार कम्प्याक्ट पर्ची रिंग जस्तै विधानसभा पर्ची, को लागी, हामी अपरेटि voltage भोल्टेज र वर्तमान, संकेत, टोक़, बिजुली आवाज, इन्सुलेशन प्रतिरोध, ढांकता शक्ति, आयाम, सामाग्री र उपस्थिति परीक्षण गर्नेछौं। सैन्य मानक वा अन्य विशेष उच्च आवश्यकता पर्ची रिंगहरु को लागी, जस्तै उच्च गति र ती पानी को वाहनहरु, रक्षा र सैन्य र भारी शुल्क मशीनरी पर्ची रिंग मा प्रयोग गरीनेछ, हामी मेकानिकल सदमे, तापमान साइकल चलाउने, उच्च तापमान, कम तापमान, कम्पन, आर्द्रता, संकेत हस्तक्षेप, उच्च गति परीक्षण र यति अगाडि। यी परीक्षणहरु अमेरिकी सैन्य मानक वा ग्राहकहरु द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण शर्तहरु अनुसार हुनेछन्।
के HD-SDI sliprings तपाइँसँग छ? हामीलाई ती मध्ये धेरै धेरै चाहिन्छ।
यस समय, हामी 12way, 18way, 24way र 30way SDI पर्ची रिंगहरु छन्। तिनीहरू कम्प्याक्ट डिजाइन र स्थापना गर्न सजिलो छन्। उनीहरु उच्च परिभाषा भिडियो को सहज संकेत स्थानान्तरण सुनिश्चित र टिभी र फिल्म अनुप्रयोगहरु को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न सक्छन्।